OPPO Enco W11 | OPPO Myanmar
ဘယ်တော့မှ ပြတ်တောက်မသွားမယ့် ဂီတသံစဉ်
နားကြပ်နှစ်ဘက်လုံးမှ Bluetooth တစ်ပြိုင်နက် ထုတ်လွှတ်နိုင်ခြင်း | စွမ်းရည်မြင့် ဘေ့စ်သံ
နာရီ ၂၀ ကြာ ခံသည့်ဘက်ထရီ | IP55 ဖုန်မှုန့်နှင့် ရေစိုခံနိုင်ခြင်း
အသံပြတ်တောက်ခြင်းများကို လျှော့ချပေးပြီး တည်ငြိမ်မှုရှိစေခြင်း
Enco W11 တွင် အသုံးပြုထားသောနည်းပညာက နားကြပ်တစ်ဖက်ထည်းမှ အချက်ပြစနစ်ကို လက်ခံ၍ အခြားတစ်ဖက်သို့ပို့ပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ နားကြပ်နှစ်ဖက်စလုံးမှ အချက်ပြစနစ်များကို တစ်ပြိုင်နက်ထည်းဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသံပြတ်တောက်ခြင်းမျိုးကို မဖြစ်ပေါ်စေပဲ ပိုမိုတည်ငြိမ်သော အသံအရည်အသွေးကို ရရှိစေပါသည်။
သင်နှင့်အတူ အမြဲရှိနေမည့် သံစဉ်များ
ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များရရှိနိုင်အောင် Bluetooth 5.0 chip ကို အထိုင်စက်ပစ္စည်းအဖြစ် ထည့်ပေးထားသည့်အတွက် အခြားသော ပြင်ပစက်ပစ္စည်းများမှ အသံအချက်ပြစနစ်များ ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခြင်းမှ အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
တွဲသုံးသော စက်ပစ္စည်းများအား အမြဲတမ်း မှတ်သားထားပေးနိုင်ခြင်း
Enco W11 နားကြပ်နှင့် တစ်ကြိမ်တွဲဖက်အသုံးပြုဖူးရုံဖြင့် ၎င်းစက်ပစ္စည်းအား ၁၀ မီတာ အကွာအဝေးအတွင်းတွင် အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်ဖုန်းအား အိတ်အတွင်းထည့်ထားလျှင်ဖြစ်စေ ၊ အခန်းခြားနေလျှင်ဖြစ်စေ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို သင်နှင့်အတူ ဂီတသံများလည်း အမြဲအတူရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ကြိမ်အားသွင်းရုံဖြင့် အားသွင်းဗူးမပါလျှင် ၅ နာရီကြာ၊ အားသွင်းဗူးဖြင့်ဆိုလျှင် နာရီ ၂၀ ကြာ နားသောတဆင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၅ မိနစ် အားသွင်းရုံဖြင့် ၁ နာရီကြာ အသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက် အားသွင်းရန် အချိန်အခက်အခဲရှိချိန်မှာပင် ဂီတသံများနှင့်အတူရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၅ နာရီ ကြာ
တစ်ကြိမ် အားသွင်းရုံဖြင့် နားဆင်နိုင်ခြင်း
၂၀ နာရီ ကြာ
အားသွင်းဗူးဖြင့် အသုံးပြုပါက အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Enco W11 တွင် ပါဝင်သော 8mm အထူရှိသည့် တိုက်တေနီယံကွန်ပိုးဇစ် အလွှာပါးဖုံးအုပ်ထားသည့် dynamic drivers သည် ဘေ့စ်အသံများနှင့်ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော အသံများအား ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ AAC အော်ဒီယို format ၏ ထောက်ပံ့မှုပေးသောကြောင့် ကုဒ်ပြောင်းသည့်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မားသည့်အတွက် ဂီတသံစဉ်များအား အသေးစိပ်ပုံဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။
Enco W11 နားကြပ်သည် ဖုန်နှင့်ရေဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ချွေးထွက်လျှင်ဖြစ်စေ ၊ မိုးရွာလျှင်ဖြစ်စေ နားကြပ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်သွားချိန်၊ အားကစားလုပ်ဆောင်ချိန် သို့မဟုတ် လေညှင်းခံသည့်အချိန် စသည့် သင်လိုအပ်ချိန်တိုင်း ဂီတသံစဉ်များက သင်နှင့်အတူ လိုက်ပါနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖုန်းပြောစဉ် မလိုအပ်သော အသံများကို စစ်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း
Enco W11 နားကြပ်တွင် ပါဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်က ဖုန်းခေါ်ဆိုစဉ်ဖြစ်ပေါ်သော ဆူညံသံများကို စစ်ထုတ်နိုင်သောကြောင့် ပါတ်ဝန်းကျင်မှ မလိုအပ်သော အသံများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူအများကြားတွင်ဖြစ်စေ၊ လမ်းမပေါ်မှကျယ်လောင်သော အသံများကြားတွင်ဖြစ်စေ သင့်စိတ်ကြိုက် ဖုန်းပြောဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Enco W11 နားကြပ်သည် ဉာဏ်ရည်ကို အသုံးပြုထိတွေ့ထိန်းချုပ်နိုင်သောကြောင့် အသုံးပြုရ အထူးလွယ်ကူမှုရှိပါသည်။ သီချင်းဖွင့်ခြင်း၊ ရပ်ခြင်းစသည်တို့ကို တချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး သီချင်းအပုဒ်ကျော်ခြင်းအတွက် နှစ်ချက်နှိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် သင်၏ အသံဖြင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းပါ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် အဆင်ပြေလွယ်ကူပြီး စွမ်းဆောင်ရည်အထူးမြင့်မားမှုရှိပါသည်။
ဖွင့်ခြင်း / ရပ်ခြင်း
( တစ်ချက်နှိပ်ပါ )
( နှစ်ချက်နှိပ်ပါ )
ဖုန်းဖြေခြင်း / ဖုန်းချခြင်း
( သုံးချက်နှိပ်ပါ )
အသံ အတိုး၊ အလျော့
( တို့ပြီး ထိပါ )
အော်ဒီယိုလုပ်ဆောင်မှုများအား အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆွဲထားခြင်း
နားကြပ်ထိပ်ဖူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင် နားနှင့်အံဝင်ဂွင်ကျ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်ပုံဖော်ထားရှိပါသည်။ သက်တောင့်သက်သာအဖြစ်ဆုံး၊ မိမိနားနှင့်အသင့်တော်ဆုံးကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်အောင် စီလီကွန်နားကြပ်ထိပ်ကို အရွယ်အစား သုံးမျိုးဖြင့် ထုတ်လုပ်ပေးထားပါသည်။
4.4g သေးငယ် ပေါ့ပါးသော ဒီဇိုင်း
ပြင်ပမှဆူညံသံများ မဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် နားအတွင်းတစ်ခုလုံးအား ငုံမိအောင် ဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားသောကြောင့် ဂီတသံစဉ်များကို ပိုမိုနစ်မြှုပ်သက်ဝင်ခံစားနိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် နားကြပ်ထိပ်ဖူး အလေးချိန်မှာ ၄.၄ ဂရမ် သာရှိသဖြင့် နားအတွင်း မည်သည့်အရာဝထ္ထုမှ မရှိသကဲ့သို့ခံစားမှုကို ရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
1. တစ်ဖက်တည်းမှသာ အချက်ပြစနစ် ပို့လွှတ်နိုင်သည့် Bluetooth နည်းပညာကို အသုံးပြုသော သာမာန်နားကြပ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက OPPO Enco W11 နားကြပ်သည် အသံပြတ်တောက်မှု အလွန်လျော့နည်းပါသည်။
2. OPPO Enco W11 နားကြပ်ကို Bluetooth 5.0 နှင့် ၎င်းထက်နိမ့်သောဗားရှင်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Android နှင့် iOS နှစ်မျိုးလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
3. သီချင်းဖွင့်နိုင်သော ကြာချိန်စမ်းသပ်ချက်ကို OPPO ၏ စမ်းသပ်ခန်း အတွင်းတွင် အသံ ၅၀% ဖွင့်၍ စမ်းသပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အားသွင်းသည့်ကြာချိန်နှင့် သီချင်းဖွင့်နိုင်သည့် ကြာချိန်များနှင့်ပါတ်သက်သော အချက်အလက်များကို OPPO စမ်းသပ်ခန်းအတွင်း စမ်းသပ်ချက်များကို အခြေခံရယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး OPPO စံညွှန်းများအရ အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အပူချိန် 25°C တွင် ထိန်းထား၍ စမ်းသပ်ရယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြာချိန်နှင့် အားသွင်းနိုင်သောပမာဏများသည် လက်တွေ့အမှန်တကယ် အသုံးပြုချိန်တွင် အခြေအနေအရပ်ရပ်ပေါ်မှုတည်၍ အနည်းငယ် ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။
4. IP55 သည် နိုင်ငံတကာစံညွှန်းဖြစ်ပါသည်။ IP5 အရ အလွန်များပြားသော ဖုန်မှုန့်ဒဏ်များမှ အာမခံနိုင်မှုမရှိပါ။ သို့သော် အနည်းငယ် ပမာဏသာရှိသော ဖုန်မှုန့်များသည် နားကြပ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ IPX5 ၏ ရည်ညွှန်းချက်သည် ဖိအားမပြင်းသည့်ရေပြွှတ်ဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှ စမ်းသပ်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် နားကြပ်ထိပ်ဖူးများနှင့်သာ သက်ဆိုင်မှုရှိပါသည်။
5. ၃ ချက်နှိပ်၍ အသံအကူအညီရယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ColorOS ဗားရှင်း 6.0 နှင့်အထက် OPPO စမတ်ဖုန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသံအကူအညီကို ထောက်ပံ့ခြင်းရှိမရှိနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖုန်း၏ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့် မော်ဒယ်အပေါ်မူတည်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ အသေးစိပ် အချက်အလက်များအား လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ၊ ဖြန့်ချီသူများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
6. IPX5 ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်မှုဆိုသည်မှာ နားကြပ်ထိပ်ဖူးပေါ်သို့ ဖိအားမပြင်းသည့် ရေပြွှတ်ဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှ စမ်းသပ်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အလွန်အမင်းဆိုးရွားပြင်းထန်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင် အာမခံနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ချွေးစားပျက်စီးခြင်းမျိုး မဖြစ်ပေါ်စေရန် ပြင်းထန်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်စဉ်တွင် နားကြပ်တပ်ဆင်ထားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
7. အထက်ဖော်ပြပါအသေးစိပ် အချက်အလက်များသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းရောင်းချသူ အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသဖြင့် တချို့သောကုန်ပစ္စည်းများ၏ အသေးစိပ်အချက်အလက်များနှင့် ဖော်ပြချက်များသည် အနည်းငယ် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ်ထွက်ရှိလာသော ကုန်ပစ္စည်း၏ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များကိုသာ ကိုးကားရန်ဖြစ်သည်။